Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaadeniya Ee Wadanka Koonfur Afrika oo Shirwayne Qabatay.
Jaaliyada Ogaadeniya Ee Wadanka Koonfur Afrika oo Shirwayne Qabatay.
Posted by Wariye Qaran	/ July 29, 2018
Waxaa maanta Shirwayne isugu yimaaday jaaliyadaha Soomaalida ogaadeenya ee East London Wadanka Koonfur Afrika shirkan ayaa waxaa kasoo qayb halay dadwayne aad u badan waxaana laga warbixiyay si waafi ah shirwrynihii 3 aad JWXO kaaso dhawaan lagusoo gaba gabeeyay wadanka Eritrea.
Shirku wuxuu kale muhiimada siiyay in dadweynaha la waydiiyo talo Iyo tusaale sidii ay u arkaan xalka ummadda dulam ee soomaalida Ogaadeniya, shirka Waxaa furay Gudoomiyaha Jaaliyadda mudane Mataan Cali Dheere wuxuuna kusoo dhaweeyay Sheekh Yusuf Guure oo wacdi diini ku faray sidii caadada inoo ahayd.
Waxaa kale oo hadalka lagu soo dhaweeyay Mudane Xildhibaan Mohamed Daahir oo ka warbixinaayay shirwrynihii 3aad ee jabhadda, marxallada siyaasadeed ee haatan lagu jiro iyo mowqiif Jabhada ONLF ee ku aadan sidii looga faa iidaysan lahaa is badalka ka dhacay geeska Afrika.
Waxaa dhankooda goobta ka hadlay odayaasha iyo dhalinyarada magaalada magaalada Ahmed ismaciil, Sheekh Khalif, Sheekh C/llaahi iyo Mowliid macalin Cabdi oo ku hadlay codka dhalinyardda, waxayna dhamaantood iska wada daba mareen xaqnimadda halgan Iyo in xilligan loo baahan yahay midnimadda ummadda la ilaaliyo.
Waxaa gabagabdii goobta gabay dadka qiiro badan galiyay kasoo jeediyay abwaan C/nasir Haybe, waxaana guntii Iyo gabadii shirka Soo xidhau midka mid ah odayasha dhaqanka Ahmed Ismaciil wuxuu shirku kusoo dhamaaday si wanagsan oo guul ah.